Madaxda xisbiyada oo ololeynaya. - BBC News Somali
Madaxda xisbiyada oo ololeynaya.
18 Juunyo 2010
Image caption madaxda xisbiyada oo wada shirsan.
Ololaha doorashada Somaliland ayaa maraya heer gabagaba ah,waxaana hogaamiyayaasha xisbiyada UDUB,KULMIYE iyo UCID ay jimcihii ka ololeeyeen magaalooyinka Burco iyo Balli-gubadle oo ay maanta isu soo baxyo lagu taageeray xisbiga UDUB ay kaga qayb galeen Madaxweyne Rayaale iyo ku xigeenkiisa Ahmed Yaasin oo isagu fagaaraha weyn ee magaalada Burco ugu khudbeeyey dad lagu qiyaasay kuwii ugu badnaa ee u soo ban-baxay xisbiga talada haya ee UDUB.
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Kulmiye oo habeenkii jimcaha u hoyday Burco ayaa subixii jimcaha wuxuu ka ololeynayey Ceel-afweyn, isagoo sabtidana ka khudbeyn doona magaalada Ceerigaabo oo uu dhawaan booqday madaxweyne Rayaale.
Boorama, waxaa ololaha doorashada shirar ku saabsan ku qabtay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Feysal Cali Waraabe, oo Axadda isna lagu wado in uu taageerayaashiisa kula hadlo fagaaraha magaalada Boorama.
Sida uu soo sheegay wariyaha BBC ee Burco Xuseen jama Jibriil,xisbiyada loolaanka doorashada 26ka juun dhacaysa ku jira waxaa u harsan kiiba maalin marka la eego qoondeyntii xisbiyada loogu tala galay mid waliba inuu shiriyo oo u fagaarayaasha magaalooyinka kala hadlo atageerayaashiisa.
Sida uu leeyahay wariyahaha BBC Xagar,dad badan waxaa ka lumay qiyaasta atageero ee xisbiyada marka la eego tirada dadka isugu soo baxa fagaarayaasha oo ay ka buuxaan dad maalin walba oo xisbi la taageerayo iska soo xaadiriya fagaarayasha.
Wariyuhu wuxuu leeyahay taageerada xisbi walbaa haysto waxay soo bixi doontaa marka inta doorashadu dhacdo ay natiijadu soo baxdo iyo cidda guushu raacdo.